प्रदेश १ मा दुग्धजन्य क्षेत्रमा नयाँ सोचको खोजी, च्यालेन्ज फण्ड मार्फत् २ करोडको लगानी हुने
२०७९ असार ९ गते
विराटनगर । प्रदेश १ मा डेरीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा एक वर्षमा २ करोडको लगानी हुने भएको छ ।
स्वीस सरकारले च्यालेन्ज फण्डमार्फत् डेरी, तरकारी, मकै र अलैँचीमा लगानी गर्नको लागि आइडिया स्टुडियोमार्फत् सहज परियोजना संचालनमा आउने भएको हो । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि परियोजनाको बारेमा जानकारी दिँदै सहज परियोजनाकी म्यानेजर सुभेच्छा श्रेष्ठले प्रदेश १ मा डेरी सम्बन्धी नयाँ केही गर्न खोज्ने नविनतम सोच भएका कृषक तथा उद्यमीलाई सहयोग गरिने जानकारी दिइन् ।
पहिलो चरणमा दुध, तरकारी, अलैँचीमा काम गरेको परियोजनाले दोश्रो चरणमा डेरीसँगसम्बन्धित उत्पादनमा केन्द्रीत भएर नविनतम सोच भएकाहरूलाई लगानी गर्न खोजिएको जानकारी दिइन् । ‘प्रदेश १ मा डेरी सम्बन्धि नयाँ केही गरौँ भन्ने सोच भएका उद्यमीलाई सहयोग गर्ने योजना छ , उनले भनिन्, नविनतम सोच भएका उद्यमी र प्रशोधन कर्ताको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसँग जोडेर जाने तयारी छ ।’
प्रदेश १ मा उत्पादन नभएका दुग्धजन्य उत्पादन, अन्न्तराष्ट्रिय बजारमा भएका तर नेपालमा नभएका, अन्य प्रदेशमा उत्पादन भएका तर प्रदेश १ मा नभएका दुग्धजन्य उत्पादनमा यो कार्यक्रम लागु हुने उनले जानकारी दिइन् । एक वर्षको अवधिमा २ करोड अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी छ । पत्रकार सम्मेलन गरेको मिति असार ९ गतेदेखि आगामी साउन ६ गतेसम्म नविनतम सोच सहितको प्रस्तव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ । उत्कृष्ट नविनतम सोचलाई ५ देखि ५० लाखसम्म सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
नेपाल एग्रिकल्चर मार्केट डेभलपमेन्ट कार्यक्रमका टिम लिडर रिक भान डेर काम्पले नेपालको लागी किसान लक्षित भएको बताए । पहिलो चरणमा धेरै किसानसँग मिलेर काम गरेको भएपनि दोश्रो चरणमा डेरीसँग जोडिएर नविनतम सोच भएकाहरुसँग काम गर्नेगरि परियोजना आएको बताए ।
प्रदेश १ कृषि मान्त्रालयका सचिव मेघटान तिमल्सेनाले प्रदेशले दुध र मासुमा फड्को मारेको बताए । दुध प्रशस्तै उत्पादन भएको भएपनि त्यसबाट कसरी नयाँपनको विकास गरी उत्पादनमा जोड दिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । नयाँ सोच भएकाहरूको लागि सहयोग गर्ने भनेर आएको यो कार्यक्रमले त्यस्ता सोच भएकालाई व्यवसाय र उद्यम गर्न टेवा पुग्ने उनले बताए ।
दुधबाट बन्ने डेरीका उत्पादन अहिले बिदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा प्रदेश १ मा नै उत्पादन गर्न सकियो भने त्योभन्दा राम्रो अरू केही हुन नसक्ने उनको तर्क छ । यो परियोजना सफल हूँदै गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि लगानी बढाउने उनले तर्क गरे । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजुकुमार रिजालले आयातलले बजार थलिएको बेला सञ्चालनमा आएको परियोजनाले धेरै विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिए । भौतिक पूर्वाधार, तालिम, निरीक्षण अनुगमन, त्यसको गुणस्तर, सुरक्षा र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आइडिया स्टुडियोका अध्यक्ष डा. छिरिङ लामाले उत्पादनसँग जोडेर प्याकेजिङ, भण्डारण र बजारीकरणमा पनि सहयोग हुने बताए । नयाँपन प्याकेजिङ र ढुवानीसँग पनि जोडिएर आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।
रक्सी पिएर प्रहरी कुट्ने दुई शिक्षक पक्राउ
नाम फेरेर उही कार्यक्रम ल्याइने, आधा महिनादेखि अवरुद्ध संसद सोमबारदेखि चल्ने
धम्की दिएर रकम असुली गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ
गोरखाका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सबै पालिका तयार, गरे सम्झौता
विलाप गर्दै प्रहरीकहाँ पुग्ने पीडित अदालतमा किन फेर्छन् बयान ?
पाँचथरमा पहिरोमा परी तीनजनाको मृत्यु, एकजनाको सकुशल उद्धार